यी चार राशी जस्मा सधै रहन्छ लक्ष्मीको कृपा । कुन कुन परेछन् छिटो हेर्नुहोस – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०७, २०७७ समय: १९:०८:०३
काठमाडौं – हुनत : धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछ ।
कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन् । कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ । निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन ।
१. वृष राशि
२. वृश्चिक राशि
धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन् । यस राशिका ब्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ । ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन । दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफंै पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ ।
कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ । यी राशिका ब्यक्ति अवसरका खोजिमा हुन्छन् । जहाँ उनिहरुको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथी बनिदिन्छ । कर्कट राशिलाई स्वभावत : धनी बनाउन उनिहरुको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ । यी राशिका ब्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडैं धनि बन्ने गर्दछन् ।
४. सिंह राशि
सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ । उनिहरु अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन् ।
साथै उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ । महंगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनिहरुको सामान्यतया : पूरा हुन्छ ।उल्लेखित सूचीमा तपाईको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । किनकी सम्पति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मष्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने ।